अन्तिम भेट……र………उनको भनाई……. - २ फाल्गुन २०७५, Newpati.Com
अन्तिम भेट……र………उनको भनाई…….
इटहरी, २ फागुन । सबै सकिसक्यो अब । मलाई भुलिदिनु । मलाई जान दिनुस । को हो हजुर र ? किन तपाईले मलाई त्यो दिन हेर्नुभयो ? म सधै त्योबाटो हिड्ने गर्दथे र? किन पछ्याउनुभयो ? हो म पागल थिए । मेरो बुवा, हाम्रो जात समस्या हैन । तपाई पनि समस्या हैन । समस्या त म आफैं थिए । म अपुरो थिए । धेरै पटक समबन्धलाई अगाडी बढाउन साथीहरुले मलाई दबाव दिन्थे तर म इन्कार गर्दथे ।
तपाई आउनु भयो मेरो जिवनमा फरक तरिकाले मलाई आफनो व्यवहारमा भिजाउनु भयो । म तपाई प्रति प्रेममा परे । प्रेम थियो या थिएन तर तपाईको कुरा मलाई असाध्यै मन पर्न थाल्यो । मैले पहिले पनि अरुलाई मन पराएको थिए । अरुसंगै बाइकमा बसेर घुमेको थिए, उसले मेरो हात पनि थामेको थियो । एक दिन हामी बिच चुम्बन भएको थियो । भविष्य सुनौलो बनाउने भन्दै बिदेशिएको उनको मृत शरिर मात्र एउटा डब्बामा नेपाल फर्किको थियो ।
तपाईले मलाई कल गरेको दिन, विहानै मैले आइलबयु लेखेको एसएमएस पठाएको थिए । विदाको दिन पनि काम गर्ने तपाईको बानीले हो मोबाइल कोठामै छोडेर अफिस जानुभएको थियो । अनि दिउसो मलाई कल गरेर बिवाहको प्रस्ताव गर्नुभयो । मैले सहजै स्विकार गरे । एसएमएसको हेक्का नै राख्नु नै भएन तपाईले ।
तपाईले मलाई माया दिनुभयो , असिम माया । सायद म मात्तिए , यसैकारण म बहकिए । घमण्डी भए, विलाशी र हजुरलाई आफैमा पाउन थाले । यसैकारण मैले त्यसपछि आएका प्रस्तावहरुलाई सहज लिए । तर ति प्रस्तावहरु स–साना चोट बनेर ममा बन्दै गए र कति बेला घाउ बन्यो मलाई थाहा भएन अनि पछि गएर मतलब पनि भएन ।
सबै सकिसक्यो अब । मलाई भुलिदिनु । मलाई जान दिनुस तपाईको जिवनबाट ।
हो प्रेम गरेको थिए । साचो प्रेम नै गरेको थिए । मैले आउँछु भन्दा रोक्नुभयो तर अब मैले तपाईलाई प्रेम गर्दिन । त्यो पल बितेर गयो । मलाई थाहा छ मेरो नजिक आउन खोज्दैहुनुहुन्छ । मेरो शरिरको या मनको त्यो नै बुझिन मैले । शायद यहाँ घण्टौ पर्खिनुहुन्छ होला तर म आउँदिन किनकी म तपाईलाइ फेरी प्रेम गर्न सक्दिन । तपाई लाई मलाइ भुल्न गाह्रो हुदैन तर मलाई तपाईलाई फेरी प्रेम गर्न धेरै गाह्रो हुनेछ । एउटा कुरा याद राख्नुहोस जो मान्छे दिलमा बस्छ, उ सधै दिलमै बस्छ ।
२ फाल्गुन २०७५ मा प्रकाशित